Banyere Anyị - Shandong Moenke door Industry Co., Ltd.
Ewebata ụlọ ọrụ
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Shandong Moenke Door Industry Co.,Ltd.dị na ọmarịcha obodo Jinan nke isi obodo Shandong.Ụlọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara 15,302 square mita.Ọ bụ nnukwu ọkachamara na-emepụta ọnụ ụzọ ụlọ ọgwụ na China.Ụlọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị ọrụ 225 na ndị na-ahụ maka nkà na ụzụ na ọtụtụ akwụkwọ ikike mmepụta ihe nke mba.Ọ nọgidere na-enwe mmekọrịta chiri anya na ọtụtụ ụlọ ọgwụ a ma ama nke ọma ruo ogologo oge.
Anyị ngwaahịa isi akpaka ụzọ, Moenke agba mbọ na-enye architectural ụzọ njikwa / ụlọ ọgwụ ọcha / ụlọ ọrụ ọcha nke mkpokọta ngwọta izute ọrụ 'chọrọ maka nchekwa, ntụkwasị obi, aesthetics, nkasi obi na anwụ ngwa ngwa, na ugbu a ghọọ onye ọsụ ụzọ nke ụlọ nbata ohere aesthetics. .Anyị bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ ụlọ ọgwụ China atọ ama ama.
Moenke na-adabere na teknụzụ na akụrụngwa dị elu nke mba ụwa, na-anakọta echiche ndị a ma ama nke ụkpụrụ ụlọ mba ụwa, atụmatụ ndị ọkachamara ziri ezi na nhazi ngwaahịa, na-agbaso asambodo nke ndebanye aha GB/T24001-2016 / ISO14001: 2005 njikwa njikwa mba ụwa, na-eme a usoro nke ngwaahịa na kwụsiri ike ọrụ, jụụ n'iji ya gee ntị, mma na adaba maka ojiji, nwere ọgụgụ isi na humanized imewe.Na anyị na-ewu 3 mba patent teknụzụ.
Moenke door ngwa ka a dịgasị iche iche nke Business Series na-ọtụtụ ebe na ụlọ akụ, hotels, ụlọ ọrụ ụlọ, super ahịa, wdg, na Medical Series ọtụtụ puku ụlọ ọgwụ n'ụwa nile, nakwa dị ka Industry Series na-emepụta ọgwụ, IT electronic ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ.
Gburugburu ụwa, anyị na-enye ụdị ngwaahịa na ọrụ dị iche iche dị elu dị elu iji mejuo ihe ndị ahịa anyị chọrọ maka ikike ịgafe, arụmọrụ nchekwa na nka nka.Ahụmahụ omimi anyị, teknụzụ ọhụrụ, teknụzụ mara mma na sistemụ netwọkụ ahịa ụwa niile bụ ihe ngwọta kachasị mma na-egbo mkpa gị n'ezie!225 Moenker nabatara gị ileta ụlọ ọrụ anyị.
Ebumnuche anyị: Mkparịta ụka bụ akụkụ dị mkpa nke nkwubi okwu nkwubi nke a ga-esite na igbu ya guzobe.
Vison anyị: Bụrụ onye ndu kachasị na ụlọ ọrụ ọnụ ụzọ ụlọ ọgwụ.
Uru anyị: Mmezu nke ndị ahịa, ịkwụwa aka ọtọ na ntụkwasị obi, ihe ọhụrụ mepere emepe na gbalịsie ike nke ọma.
Ụlọ ọrụ anyị na-ebuli iji ụkpụrụ mba na ụlọ ọrụ, na-achịkwa usoro ọ bụla, na-ekwe nkwa ịdị mma nke akụkụ ọ bụla.Mgbe akụrụngwa na-agbanye ndị ahịa anyị, anyị ga-eme nyocha zuru ezu banyere arụmọrụ nke akụrụngwa anyị, wee melite teknụzụ na ịdị mma anyị.Anyị nwekwara ISO9001: 2008 na CE akwụkwọ.
Dị oke arụmọrụ
Anyị ụlọ ọrụ nwere a elu oru otu, ihe karịrị 20 ọkachamara oru mkpara.Ha ga-agbalị ike ha niile iji rụpụta ezigbo akụrụngwa nye ndị ahịa anyị.Anyị nwere ngalaba na-ere ahịa nke onwe, nke zuru oke maka ndị ahịa.N'ime awa 24 ka ị nwetasịrị ozi nrụzi ahụ, enwetara gị nsogbu ahụ.Na injinia anyị ga-enyekwa ọrụ mba ofesi.
Ndị ahịa gburugburu ụwa
Gaa leta osisi ndị ahịa anyị gburugburu ụwa
Ụlọ ọgwụ mmekọ nke Mahadum Qingdao
Ụlọ ọgwụ mbụ Anhui Yingshang
Ụlọ ọgwụ ahụike nne na nwa
Ụlọ ọgwụ ndị mmadụ Nanxian
Hospitallọ ọgwụ ndị mmadụ Shenyang isii